Sarim-piraketana sy soratra amin'ny soratra O Tannenbaum ho an'ny Kiunder
O Christmas tree - fanamarihana sy lahatsoratra
O Christmas tree - lahatsoratra
Ny fomban-drazana mihira ny Krismasy Krismasy any an-trano miaraka amin'ny fianakaviana sy ny ankizy, na any am-pianarana na any am-pianarana, dia tsy dia antitra loatra. Avy amin'ny manodidina ny 18. Ny taona dia mihira ao amin'ny faritry ny fianakaviana ary hatramin'ny 19. Ny Century dia mahafantatra ny hiran'i Alemana avy any amin'ny firenen-kafa.
Soratra mozika sy soratra hoe O Christmas tree
Ny fihirana sy ny fanaovana mozika miaraka amin'ny Krismasy dia mitondra voly tsara sy tena miavaka sy miavaka. Tsy ny ankizy rehetra ao amin'ny sokajin-taona rehetra ihany no tia azy io. Matetika ny hira no miverimberina na mandre mandritra ity fotoana ity, fa tsara kokoa ilay lahatsoratra. Raha afaka milalao fitaovana ianao, dia afaka milalao accompany.
Amin'ny fipihana ny sary dia misokatra amin'ny taratasy pdf ny takelaka fanangonana miaraka amin'ny marika sy lahatsoratra momba ny Christmas carol
Manao ahoana ny haben'ny ravinao?
Tsy maitso ianao amin'ny fotoan'ny fahavaratra,
Tsia, na dia amin'ny ririnina aza, rehefa mandroso:
Akory ny hatsaran'ny fitiavanao!
Tena tiako ianao!
Matetika matetika no tsy amin'ny fotoan'ny Krismasy
Ny hazo dia mahafaly ahy;
Ny akanjo tianao hampianatra zavatra ahy!
Ny fanantenana sy ny faharetana
manome fampiononana sy tanjaka amin'ny fotoana rehetra!
Open music of Christmas Carol O Tannenbaum as a file
Miangavy anao mba hifandray aminayraha mitady karazan-tsoratra sy tononkalo hafa ianao. Faly izahay manampy an-tsoratra maromaro amin'ny lahatsoratra ao amin'ny fanangonan-tsainay momba ny hiran'ny ankizy. Ny famolavolana ny fanamarihana amin'ny ankizy-pejy sarintany mety dia sarotra, saingy raha ilaina dia tiantsika ny manandrana izany.
Isan-taona - fanamarihana sy lahatsoratra
Ny ducklings rehetra - fanamarihana sy lahatsoratra
Efa misy ny vorona rehetra - fanamarihana sy lahatsoratra
Mirehitra ny jiro eny amin'ny hazo krismasy - fanamarihana ...
Eo amin'ny hazo dia mipetrapetraka ny akoho iray - fanamarihana sy lahatsoratra
Miara-mandihy amiko ireo rahalahy - fanamarihana sy lahatsoratra
Ny akorandriaka sy ny ampondra - fanamarihana sy lahatsoratra
Nitsangana ny volana - fanamarihana sy lahatsoratra
Lehilahy iray mijoro ao anaty ala - fanamarihana sy lahatsoratra
Nisy vorona naniry hanao fampakaram-bady - fanamarihana sy lahatsoratra
Feno fankalazana Krismasy na aiza na aiza - fanamarihana sy lahatsoratra
Fox, ianao nangalatra ny goose - fanamarihana sy lahatsoratra
Lohahevitra amin'izao fotoana
Vakio? No thanks. Ny famongorana ny boquistes ao amin'ny 21. taonjato